ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံအားပေးတဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာရှင်များကို အာဏာပိုင်များက ဧည့်စာရင်း ထုတ်မပေးတော့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံအားပေးတဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာရှင်များကို အာဏာပိုင်များက ဧည့်စာရင်း ထုတ်မပေးတော့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တွေ့ဆုံအားပေးတဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဝေဒနာရှင်များကို အာဏာပိုင်များက ဧည့်စာရင်း ထုတ်မပေးတော့
Posted by နွယ်ပင် on Nov 19, 2010 in Myanma News, News | 13 comments
မြန်မာ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်၊ ကမ္ဘာ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု ပြယုဂ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ် (တောင်ပိုင်း) အမှတ် ၁၈ (ခ) ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘောဇ ၂ လမ်း၊ အမှတ် ၃၇၆ တွင် နေထိုင်နေတဲ့ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ အေအိုင်ဒီအက်စ် ဝေဒနာရှင်များအား ဧည့်စာရင်း ထပ်မံ ထုတ်ပေးတော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်က နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီမှာ လူနာများအား ကူညီပေးနေသူ ဦးစူပါ (ခ) ဦးထင်အောင်ကို ပြောကြားကြောင်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်တွေဟာ လူနာတွေကို ကူညီပေးနေသူ ဦးစူပါ (ခ) ဦးထင်အောင်ကို ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ် ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်ရုံးကို နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီတွင် လာရောက်ဖို့ အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို အကြောင်းကြားမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးထင်အောင်က ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်တွေနဲ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံစဉ် သက်ဆိုင်ရာက ဝေဒနာရှင်များအား ဧည့်စာရင်း ထုတ်ပေးတော့မှာ မဟုတ်ကြောင်း အသိပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ဧည့်စာရင်းဟာ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်ခန့်အထိသာ သက်တမ်းရှိတဲ့အတွက် အဲဒီနောက်ပိုင်းကျရင် လူနာတွေ နေထိုင်နိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ အခုလို အကြောင်းကြားတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဒနာရှင်များ၊ ကူညီ လုပ်ဆောင်နေသူများ ဘယ်လို ခံစားရပါသလဲလို့ မေးကြည့်တဲ့အခါ “ကျွန်တော်တို့က လူနာတွေကို ကူညီပေးနေတာလည်း ကြာပြီဆိုတော့ သိတ် မတုန်လှုပ်ပါဘူး။ ဖမ်းလည်း ဖမ်း ပေါ့။ လူမမာတွေကတော့ တော်တော်များများ မသိကြသေးဘူး။ အိပ်တဲ့သူကတော့ အိပ်ကုန်ပြီ။ သိတဲ့သူက သိတယ်။ လူမမာတွေကတော့ ဒေါသထွက်နေတာပေါ့။ ကြောက်လည်း ကြောက်နေကြတာပေါ့၊“ လို့ ပြောပြပါတယ်။ သူက ဆက်ပြီး “ကျွန်တော်တို့ကတော့ မပြောင်းဘူုး ခင်ဗျ။ ဘယ်အခြေရောက်ရောက် နေထိုင်သွားမှာပဲ။“ လို့ ပြောပါတယ်။ သူ့ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းတဲ့အခါ “စိတ်ထဲမှာ တော်တော်ခံစားရတာပေါ့။ တရားတယ်လို့ ဘယ်ထင်မလဲ၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ လူနာတွေလေ။ ခိုကိုးရာမဲ့လို့ ကူညီကယ်တင်မယ့်နေရာဌာနကို ရောက်နေတယ်။ ဒါကို မောင်းထုတ်မယ်ဆိုရင် ဒီလူနာတွေ အကုန် ဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့။ စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်တယ်။“ လို့ ပြောပါတယ်။
ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်တွေ ပြောစကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးထင်အောင်က “သူတို့က အကြောင်းရှာနေတာပဲ။ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အဆင်မပြေဘူး ပေါ့။ ရပ်ကွက်ထဲက ဒီအိမ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရပ်ကွက်ထဲမှာ မထားချင်တဲ့ပုံစံမျိုး ပြောတယ် ပေါ့။ လူဦးရေ ဒီလောက်များများကို လက်ခံထားတာ တန်စိုးလက်ဆောင် ရလို့လား၊ ပြောစရာဖြစ်နေတယ် ဘာညာပေါ့။ အဲဒီလို ပြောတယ်။ ရပ်ကွက်နဲ့ကတော့ ပြဿနာ မရှိဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲကတောင် ထမင်းတွေ ဟင်းတွေ လာ လှူတာမျိုးရှိတယ်။ တခုခု အလှူလုပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ကို ဖိတ်ပြီးတာမျိုး၊ အိမ်ကို လာပို့တာမျိုး ရှိတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း အိမ်မှာ တခုခုလုပ်ရင် ပို့တာမျိုး ရှိပါတယ်။ သိတ်ပြီး ထူးထူးခြားခြား ခွဲခွဲခြားခြား ပြဿနာတက်တာ မရှိဘူး ဗျ။“ လို့ ရှင်းပြပါတယ်။
အိပ်ခ်ျအိုင်ဗီ အေအိုင်ဒီအက် ရောဂါရှင်များအား ကူညီလုပ်ဆောင်မှုကို အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင် ဒေါ်ဖြူဖြူသင်းက ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်နေပြီး အခုအခါမှာ ဒဂုံမြို့သစ်မြို့နယ် (တောင်ပိုင်း) အမှတ် ၁၈ (ခ) ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘောဇ ၂ လမ်း၊ အမှတ် ၃၇၆ တွင် လူနာများကို ကူညီ စောင့်ရှောက်လျက် ရှိပါတယ်။ အခုလို လူနာများအား ဧည့်စာရင်း ထပ်မံ ရက်တိုးပေးမှာ မဟုတ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာက အကြောင်းကြားခြင်းဟာ လူနာများကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက် အားပေးပြီး နောက်တရက်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
(Burma Today http://burmatoday.net/ မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါတယ်။) ဓါတ်ပုံ ဒီမိုဝေယံ
ဒီသတင်းဟာ အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့ လုံးဝမဖြစ်သင့်ပါဘူးလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်
မတရားဘူး။ လုံးဝမတရားဘူး။ ဒီရပ်ကွက် အဲဒီ ရ၀တတွေ ၀ဋ်လည်ပါစေ။ အဲလိုပြောရင် ကိုယ်က မကောင်းတာဖြစ်အုံးမယ်။ နည်းနည်းမှ ဦးနှောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေ။ အင်းလေ ဒါကြောင့်မို့လဲ ရ၀တဖြစ်နေကြတာကိုး….
ရက်ပိုင်းလေးဘဲရှိသေးတယ် ဇာတိရော ဇာတာရော
လူတွေမှ ဟုတ်သေးရဲ့ လား မသိဘူးနော်
ရမလားလို့ခြောက်ကြည့်တာပါ။ ဒေါ်စုကတချက်လောက် ဟောက်လိုက်ရင် ငြိမ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ရပ်ကွက်အဆင့်က စာနဲ့တောင်မပြောတာကို ကြည့်ပါလား။ အများကဝိုင်းဆဲရင် မြို့နယ်က သူတို့မသိပါပေါ့၊ မြို့နယ်ကလုပ်တော့လည်း တိုင်းကမသိပါပေါ့။ ကိုဂျော်နီအောင်ပု စကားနဲ့ဆိုရင် ဘေဘီဂိမ်းလေးတွေပါ။ သတင်းမျက်ခြေတော့ မပြတ်စေနဲ့ပေါ့။ မြန်မာပြည်အတွက် အလှည့်အပြောင်းက လာတော့ပါမယ်၊ အခုလုပ်နိုင်တာ ဘယ်သူဘာကောင်ဆိုတာ အထောက်အထားနဲ့ စုဆောင်းထားကြ။ ခေတ်ပြောင်းရင် သူတို့သခင်တွေ ထုတ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ပဲ သူတို့ကိုပြန်ဆော်မယ်။
ယုတ်မာချက်ကတော့ကမ်းကုန်နေပြီ လာတော့မှာပါမင်းတို့ အလှည့်
ခံရမယ့်အလှည့်ကျမှ အမေစုထမိန်စလိုက်မဆွဲကြနဲ့ ရ၀တဆိုတာလဲပညာ
မတက်တဲ့ဂလေကချေတွေပဲ အုပ်ချုပ်တဲ့လူကအစ ပညာမတက်တော့
လက်အောက်ငယ် သားဦးနှောက်မရှိတာ မထူးဆန်းပါဘူး
ထွီ………ခွေးကျင့် ခွေးကြံတွေကလည်း ကုန်ကိုမကုန်နိုင်တော့ဘူး.။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သွားရောက်အားပေးခဲ့သော တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ HIV/AIDS ပိုးရှိသူများကို သာကေတမြို့နယ် ဆေးရုံတက်ရောက်၍ ကုသမှုခံယူရန် မြို့နယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌက ညွှန်ကြားကြောင်း ကုသရေးစင်တာ အုပ်ချုပ်သူ ဦးထင်အောင်က ပြောသည်။
“ပြောင်းရွှေ့တာကို သူတို့ ၅ ရက် အချိန်ပေးမယ်ပေါ့။ ဆက်နေမယ်ဆိုရင် အရေးယူလို့ရတယ်။ အရေးလည်း ယူမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒီမှာက ဘိုးဘွားဂေဟာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ပရဟိတလည်း မဟုတ်ဘူး။ တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ဆေးရုံလည်း မဟုတ်ဘူး။ မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ အဖွဲ့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ အိမ်တအိမ်မှာ ဒီလောက်များများထားလို့ မရဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ပြောတယ်” ဟု ဦးထင်အောင်က ပြောသည်။
မြို့နယ်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကိုကိုလှိုင်က ဦးထင်အောင် ခေါ် ဦးစူပါကို ယမန်နေ့တွင် ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး၊ ၂၅ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ဆေးရုံသို့ရွှေ့ရန် သို့မဟုတ် နေရပ်ရင်းပြန်ရန် ပြောသည်ဟု ဆိုသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူမှုရေးအထောက်အကူပြုအဖွဲ့က ထောက်ပံ့ထားသော တောင်ဒဂုံမြို့နယ် ၁၈ ရပ်ကွက် ကမ္ဘောဇလမ်းရှိ ကုသရေးစင်တာတွင် HIV/AIDS ပိုးရှိသူ ၆၆ ဦး ရှိနေသည်။
ဆေးရုံသို့ ပြောင်းရွှေ့လျှင် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကုတင်၊ မွှေ့ယာများ ထောက်ပံ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပါ ကူညီသွားရန် မယက ဥက္ကဋ္ဌ က ကတိပြုသွားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း နိုင်ငံပိုင် ဆေးရုံများတွင် ဆေးကုသစောင့်ရှောက်မှု ညံ့ဖျင်းလေ့ရှိခြင်းက စင်တာရှိ HIV/AIDS ပိုးရှိသူများကို ဆေးရုံတက်ရန် တွန့်ဆုတ်စေတော့သည်။
“ဒီအိမ်ကိုပဲ အားကိုးနေရတာလေ။ အမေစုလာတဲ့အတွက် အရမ်းပျော်တယ်။ အရမ်းလည်း ဝမ်းသာနေတဲ့ အချိန်မှာ သူတို့က ပြောလိုက်တော့ ဝမ်းနည်းကြတယ်။ လူနာတချို့ ဒီမှာမနေရတော့ဘူဆိုပြီး ဝမ်းနည်းကြတယ်” ဟု ဒေးဒရဲမြို့မှ လာရောက်စောင့်ရှောက်မှု ခံယူနေသော မဝင်းဝင်းနိုင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
မဝင်းဝင်းနိုင်က ဆေးရုံသို့ မပြောင်းလိုသလို နေရပ်သို့လည်း မပြန်ဟု ပြောသည်။ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းလိုက ဖမ်းစေတော့ဟု သူမက ဆိုသည်။
ယခုလ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တောင်ဒဂုံနှင့် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်များရှိ HIV/AIDS ကယ်ဆယ်ရေးစင်တာများသို့ သွားရောက်အားပေးခဲ့သည်။
မြောက်ဒဂုံစင်တာတွင် ကုသမှုခံယူနေသော HIV/AIDS ပိုးရှိသူ ၁၆ ဦးကိုမူ ဆေးရုံတက်ကုသမှုခံရန် အာဏာပိုင်များက ညွှန်ကြားမှု တစုံတရာ မရှိသေးပါ။
HIV/AIDS နှင့် နေထိုင်သူများကို မည်သို့သောကြောင့် တားမြစ်ရသည်ကို စုံစမ်းလေ့လာသွားမည်ဟု NLD ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင် ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောသည်။
၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှစ၍ NLD လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့မှ ကူညီမှုဖြင့် ဗဟိုဦးစီးကော်မတီဝင် မဖြူဖြူသင်းနှင့် လူငယ်များ ဦးစီးထူထောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယုတ်မာစရာနည်းလမ်းကလည်းမကုန် မကုန်နိုင်ဘူး သူ့ဟာသူတောင်ရောဂါဖြစ်လို့ ဒုက္ခရောက်နေကြရရှာတာ တော်တော်ကိုလူစိတ်မရှိတဲ့ဟာတွေပဲ လူစိတ်မပြောနဲ့ တိရိစ္ဆာန်နဲ့တောင်မနှိုင်းနိုင်လောက်အောင် ယုတ်မာနေကြတာ
ဘာလဲ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော် @#@#!@#@!*******#@အဲ ဒီပိတ်ပင်တဲ့ ကောင်တွေ မင်တို့မကြာခင်မှာ အေဝမ်းဒီဖိုက်ရမဲ့ကောင်တွေ မြောက်ဥက္က လာ ဝေဘာဂီ ဆေး ရုံ ကလည်းငွေထိုးပြီး ဆေးရအောင် လုပ်နေတာကလွဲလို့ တယ် လူနာတွေရှားနေတယ်လို့ ရောဂါသယ်တယောက်ကပြောပြဘူးတယ်..။ဆက်ဆံရေးကတော့ အသာထားပါ…။လူနာတွေရေ ဘာမှမကြောက်နဲ့လို့ အခုဖြစ်နေတဲ့ရောဂါထက်ဒီကောင်တွေ ကိုဂရုစိုက်စရာမလိုဘူျးနအဖပြောတဲ့ ဒီမို ကရေစီ နိုင်ငံဆိုရင် နိုင်ငံသား တယောက်ရဲ့အခြေခံအ ခွင့်ရေးကဘာလဲလို့သာခပ်မာမာမေးလိုက် စာပါ မဝင်းဝင်းနိုင်ပြော သလိုသာနေလိုက် အားလုံးပြေလည်သွားလိမ့်မယ်..။ကိုကို လှိူင်ဆိုတဲ့ လူကိုသိတဲ့လူရှိရင်ြေ့ပာလိုက်ဗျာ ခင်ဗျားပထွေး နွားအဖွဲ့က ဒီမို ကရေစီ လို တွန်ထားတာ လေ မင်းတို့လုပ်နေတာက အာဏာရှင်ဆိုတာ ဘဲ
တစ် နေ. သူ တို. ဖြစ် မှ ကြည်. မဲ. သူ တောင် ရှိ မှာ မ ဟုတ် ၀ူး …
ရှုပ်ပါတယ်ဗျာ….အဲဒီတားနေတဲ့ကောင်တွေ အိမ်လာပြောတုန်း……….လူနာတွေဆီက သွေးနည်းနည်းယူပြီး….အအေးနဲ့ရောပြီး ဖျော်တိုက်ပြီး ဧည့်ခံလိုက်….မကောင်းဘူးလား
ဆေးရုံတွေက မကြည့်တဲ့နိုင်တဲ့ ဂရုမစိုက်နိုင်တဲ့ အတွက် ဂရုစိုက်တဲ့အိမ်မှာ လာနေကြတာ သူတို့တွေက ခိုကိုးရာမဲ့ လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရ ရပ်ကွက်ထဲ ဒီလိုနေတာက လူနာတွေအတွက်ကော လူနာရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက်ကော အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
လူနာတွေကို ဂရုစိုက်ချင်တဲ့ စိတ်တကယ်ရှိရင် ဆေးရုံမှာလည်း သွားကြည့်လို့ ရနိုင်တယ်မို့လား။
ဒါပေမယ့် သွားတွေ့ချင်ရင်၊ ထောက်ပံ့ ဧည့်ချိန်မှာတွေ့ပါ။ ဧည့်ချိန်လွန်ရင် ………………….ဂိတ်စောင့် ကို လက်ဘက်ရည်ဖိုးပေးနေရလို့ လူနာကို ထောက်ပံ့မယ့် ငွေလျော့နေဦးမယ်။ အနှိမ့်ဆုံးကျပ် ၂၀၀ ပေးမှ ပေးဝင်တယ်။ ဘယ်ဆေးရုံလဲ မမေးနဲ့ ဦး၊ ရန်ကုန်မှာ ကျွန်တော်ရောက်ဖူးတဲ့ ဆေးရုံတိုင်းပဲ။